မျှမျှတတ တွေးပေးပါ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Thursday, February 07, 2013 Article, Htay_Lwin_Oo No comments
ဗြိတသျှ ခေတ်တစ်လျှောက်လုံး မြန်မာကို ဘားမား လို့ရေးခဲ့ ပြောခဲ့တယ်၊ မြန်မာများကို ဘားမီးဆ် လို့ ရေးခဲ့ ပြောခဲ့တယ်။ ဦးနေ၀င်း ခေတ်တစ်လျှောက်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ရေးခဲ့ပြောခဲ့တယ်။ န၀တ၊ နအဖ ခေတ်များနဲ့ အခု ဒီမိုကရေစီကို ကူးပြောင်းတဲ့ ခေတ်မှာတော့- ရှေးခေတ်ထုံးစံများကို မလိုက်ဘဲ-၊ ဗြိတိသျှ မတိုင်မှီ ရှေးမင်း များ သုံးခဲ့တဲ့ အတိုင်း “မြန်မာ”လို့ ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် နားဖေါက်ခဲ့လို့-၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးက “မြန်မာ”ကို “ဘားမား”ရယ်လို့ နှတ်ကျိုးနေပါတယ်။- ဟိုတစ်လောက အမေရိကန် သံရုံးက သူတို့ နှတ်ကျိုးနေတဲ့ စကား အတိုင်း “ဘားမား”လို့ ပြောဆို သုံးစွဲမိလိုက်တာ-၊ မြန်မာအစိုးပိုင်းက ဆွေ့ဆွေ့ခုန် ဒေါသတွေ ထွက်ပြခဲ့ပါတော့ တယ်။
ဗြိတိသျှခေတ်နဲ့- ဦးနေ၀င်း ခေတ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ “ရခိုင်နယ်”ကို အာရ်ကန် လို့ ရေးခဲ့၊ ပြောခဲ့တယ်။ ရခိုင်နယ် မြေပုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံများမှာလည်း ရခိုင်နယ်ကို “အာရ်ကန်”လို့ပဲ အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့ ရေးသားခဲ့ တယ်။ ဒီနေ့ထိလည်း ရခိုင်ပါတီများ ဖြစ်တဲ့ ALD နဲ့ ALP တို့က ရခိုင်နယ်ကို “အာရ်ကန်”လို့ပဲ ပြောဆိုနေဆဲပါ။ န၀တ၊ နအဖ ခေတ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်းကူးပြောင်းတဲ့ အစိုးရခေတ်မှာ- အာရ်ကန် ဆိုတဲ့ နယ်ကို “ရခိုင်” ဆို ပြီး ပြောင်းလဲလိုက်ပါတော့တယ်။ တစ်ကယ်တော့- “ရခိုင်” ဆိုတဲ့ အမည်နာမဟာ ရှေးဗမာမင်းများ လက်ထက် က ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့-၊ မဟာဝိဟိကတိုင်းက ဗမာလူမျိုးများကို ခေါ်တဲ့ အမည်နာမ သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အစိုးရ ပြောင်းလဲထားတဲ့ “ရခိုင်” ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို မခေါ်ဆိုဘဲ ဗြိတိသျှခေတ်နဲ့ ဦးနေ၀င်းခေတ်တစ်လျှောက် နှတ် ကျိုးနေတဲ့ အတိုင်း ခေါ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူကို မြန်မာအစိုးရပိုင်းက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး အော်ဟောက်ဦးမှာ သေချာနေ ပါတယ်။
ဒါဆို- ဗြိတိသျှ အစိုးရက သန်းခေါင်စာရင်းမှာ မှတ်တမ်းမတင်ခဲ့လို့၊ ဦးနေ၀င်းခေတ်က သန်းခေါင်းစာရင်းမှာ မှတ်တမ်းမတင်ခဲ့လို့ ဆိုပြီး “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ် မပြုနိုင်ဘူးလို့- ဒီမို ကရေစီကို ကူးပြောင်းပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်များက ဘာကြောင့် ငြင်းဆန်နေပါသလဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဗြိတိ သျှ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာ၊ ဦးနေ၀င်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာကို လက်မခံလိုဘဲ-၊ သူတစ်ပါးကိုတော့ ဘာကြောင့် အတင်း လက်ခံစေပါသလဲ။ ဗြိတိသျှ မတိုင်မှီက “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့ အမည်နာမ မရှိခဲ့လို့ ဆိုပြီး ခံငြင်းဦးမှာလား။
ဗြိတိသျှ မတိုင်မှီကတည်းက “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့ အမည်နာမက ရှိပြီးသားပါ။ ဗြိတိသျှတို့ ရခိုင်နယ်ကို မ၀င်မှီ ၁၇၉၉ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ် သုတေသီ ဖရန်စစ် ဘူချာနန် ရဲ့ မှတ်တမ်း- သူ့မတိုင်မှီ နှစ် ၅၀ ကျော်အရင်က ဂျာမန် ပညာရှင်ရဲ့ မှတ်တမ်းများမှာ ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်သလို-၊ ရှေးဗမာမင်းကိုယ်တိုင်က မဟာဝိဟိကတိုင်း (မဟာရိုဟင်ဂ တိုင်း ကို အသံကွဲရေးမှတ်တဲ့ မှတ်တမ်းက) ရှိပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
ရခိုင်နယ်က ကျောက်စာများကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့ ဘာသာစကား၊ ရခိုင်နယ်က ဒင်္ဂါးများကို သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ငွေကြေး ဒင်္ဂါးပြားပေါ်က စာပေတွေကိုယ်တိုင်က ဒီနေ့ ရိုဟင်ဂျာများ သုံးစွဲ ပြောဆိုနေတဲ့ ဘာသာစကားများ ဖြစ်နေပါ တယ်။ သမိုင်းကြောင်းကို ဘယ်လိုလိုက်လိုက်- “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ဟာ မဟာဝိဟိကတိုင်းရဲ့ ရှေး အကျဆုံး မူလဘူတ လူမျိုးဖြစ်နေပြီး- မြန်မာမင်းများက ရခိုင်လို့ ခေါ်တွင်စေတဲ့ ဗမာများက နောက် ရခိုင်နယ် မှာ နောက်ကျမှ ၀င်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးနွယ်သာ ဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲ ဥပဒေအရ- တိုင်းရင်းသား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမယ့် လူမျိုးနွယ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာ စကား ကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ရှိရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါဆို- ဒီနေ့ ရခိုင်နယ်က မိမိကိုယ် မိမိ ရခိုင်လို့ ခံယူထားတဲ့ လူသားများမှာ ကိုယ်ပိုင်စာ၊ ကိုယ်ပိုင်စကား၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ရှိပါသလား။- လုံးဝ မရှိပါ။ ဗမာများသာ ဖြစ်ပြီး အသံကွဲယုံမျှသာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကား ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဘာသာစကားဟာ ဘင်္ဂလီနဲ့ မတူညီ ကွဲပြား ကြောင်း- အင်္ဂလိပ် သုတေသီ ဖရန်စစ် ဘူချာနန်က ၁၈၀၁ ခုနှစ်ထုတ် Asiatick Researches စာအုပ် Vol 5th စာမျက်နှာ ၂၃၈- ရခိုင်ဒေသ ဘာသာစကားနှိုင်းယှဉ်ပြ ဇယားမှာ ဖေါ်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်စာပေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စာပေက ရှေးဟောင်း နာဂရီ (ရှေးဟောင်း ဘင်္ဂလီ) အက္ခရာနဲ့ ရေးသားတဲ့ စာပေပါ။ ဒါကို ရခိုင်ဘုရင်မင်းများ လက်ထက် တစ်လျှောက်လုံး သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဗမာအင်ပါယာကြီး ကျယ်လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါ- ဗမာများက စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးသွားပြီး သူတို့ရဲ့ စာပေများကိုလည်း ဖျက် သိမ်း ခဲ့ပါတယ်။ ဗမာများက မွန်တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မွန်စာသင်ကျောင်းများကို ပိတ်ပင်ခဲ့သလို၊ ရိုဟင်ဂျာ (ရိုင်ဝင်က၊ ၀ိဟိက) တို့ရဲ့ စာသင်ကျောင်းများကိုလည်း ပိတ်ပင်မှေးမှိန်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာတတ်သူ မိသားစုများက သားစဉ်မြေးဆက် သင်ပေးလာခဲ့တဲ့ ပူတီး လင်္ကာ စာများက တတ်မြောက်နေသူ များ ဒီနေ့ထိ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ (၀ိဟိက)များရဲ့ မူရင်းစာပေ မှေးမှိန်ခဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်းရင်း တစ်ခုက- သူတို့ဟာ အစ္စလာမ်သာသနာကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး- အာရ်ဗီ၊ ဖာရ်စီ စာများကိုပဲ ဆည်းပူးခွင့်ရခဲ့ကြောင့် လည်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်- အစဉ်အလာ ပူတီးဖတ်တတ်တဲ့ လူများကတော့ ရှိနေဆဲပါ။
ဒီနေ့အခါမှာ- ရခိုင်စာ ပေပညာရှင်များကလည်း မိမိတို့ရဲ့ ရှေးသမိုင်းတွေကို ပြန်လည်လေ့လာစေဘို့ ရခိုင် ကျောက်စာ သင်ပေးနေတဲ့ သင်တန်းများလည်း ရှိလာနေပါပြီ။ အဲ့ဒီကျောက်စာကို ဖတ်ဘို့ သင်ပေးတဲ့ ဆရာ များ၊ သင်ယူတဲ့ တပည့်များ အနေနဲ့- စာတစ်ခုကို မူရင်းအသံထွက် အတိုင်း သင်ကြားလေ့လာစေလိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက “ဆ” အသံကို “သ” အသံနဲ့ မြန်မာမှုပြုသင်ခြင်းမျိုးကို ရှောင်စေလိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာရင် အင်္ဂလိပ်အသံကို အတတ်နိုင်ဆုံး နီးကပ်အောင် လေ့လာရသလို၊ ရခိုင်ကျောက်စာကို လေ့လာရင် လည်း သူ့ရဲ့ စာပေ မူရင်းအသံကို အတတ်နိုင်ဆုံး နီးကပ်အောင် လေ့လာဘို့ လိုပါမယ်။ ပြီးရင် အဲ့ဒီ ဘာသာ စကားပြောတဲ့သူများက ရခိုင်နယ်မှာ ဘယ်သူတွေများ ဖြစ်ပါသလဲ ဆိုတာကို စူးစမ်းဘို့ လိုပါမယ်။ တိုင်းပြည် တစ်ခုမှာ ဘာသာစကား တစ်ခုကို ပြောသူ မရှိဘဲ-၊ ဘုရင်များ မင်းများက အဲ့ဒီ စကား၊ အဲ့ဒီစာကို သုံးခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်မှုမျိုးတော့ ထားစေလိုပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာ”များကို မဆီမဆိုင် မုန်းတီးတဲ့ အစွဲနဲ့ သူတို့ ဆီက မေးမြန်းခြင်း မရှိရင်တော့- မြန်မာများ ဦးနေ၀င်းခေတ်က အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာသလိုသာ ဖြစ်နေပါ လိမ့်မယ်။ သင်တော့သင်၏ မတတ်၊ တတ်တော့တတ်၏ လူတောမတိုးနိုင် ဆိုသလို-ပါ။
ရိုဟင်ဂျာများမှာ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုလည်း ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုက ဘင်္ဂလားပြည်က ဘင်္ဂလီများ ထက်၊ ရှေးဟောင်းမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပိုမိုနီးစပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို စနစ်တကျ သေသေချာချာ လေ့ လာသင့်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာများဟာ မွတ်ဆလင်တွေ ဖြစ်လို့- ဗြိတိသျှက အာရ်ကန်နယ်ကို စတင်အုပ်ချုပ်တဲ့ ကာလကစ၊ သူတို့ ကို မဟာမေဒင်များလို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှရဲ့ ပထမဦးဆုံး အာရ်ကန်မှတ်တမ်းအရ- အာရ်ကန်နယ် မှာ မဟာမေဒင် လူဦးရေဟာ နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ ရှိနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်များက မွေးနှုန်းကောင်း တယ်လို့ ကမ္ဘာကရော၊ မြန်မာကပါ သဘောတူ ထောက်ခံထားတော့-၊ ဒီနေ့မှာ အနည်းဆုံး ရခိုင်နယ်ရဲ့ ထက် ၀က်သော လူဦးရေဟာ မဟာမေဒင် ရိုဟင်ဂျာများပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ ၂၀၁၂ ခု လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီရဲ့ စကား အရ ရခိုင်နယ်က အခြားသော မဟာမေဒင် (ကမန်)လူမျိုးများ ၇၀၀၀ ကျော်လေးပဲ ရှိနေပါတယ်။ ရခိုင်မှာ လူဦး ရေ ၃ သန်းရှိရင်- မွေးနှုန်းကောင်းတဲ့ ရိုဟင်ဂျာက ၁.၅ သန်းရှိရပါမယ်။ ရခိုင်မှာ လူဦးရေး ၅ သန်းရှိရင် ရိုဟင် ဂျာက ၂.၅ သန်း ရှိရပါမယ်။ ဒါတွေဟာ အမှန်တစ်ကယ် ဖြစ်သင့်တဲ့ လူဦးရေ စာရင်းကို လျှော့ပြီး တွက်ပြထား တာပါ။ တစ်ကယ်လို့ “ရိုဟင်ဂျာ”ဟာ ရခိုင်နယ်က မူလ လူမျိုး မဟုတ်ခဲ့ရင်-၊ ဗြိတိသျှ ၀င်လာစဉ်က မှတ်တမ်း တင်ခဲ့တဲ့ မဟာမေဒင်တွေ အခု ဘယ်ကို ရောက်ကုန်ပြီလဲ။ မြန်မာအစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူသည်းစိတ်နဲ့ မဟာမေဒင်များကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီလား-ဆိုတဲ့ အဖြေကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ မိမိစကား နဲ့ မိမိ၊ မိမိလုပ်ရပ်နဲ့ မိမိ-၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံတော့ မဖြစ်စေလိုပါ။
မျက်ကန်းမျိုးချစ်များ စွပ်စွဲသလို- ဒီနေ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဗြိတိသျှ ခေတ်က ခေါ်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ဖြစ်နေ တယ် ဆိုရင်လည်း- ရခိုင်နယ်မှာ အခုရှိနေတဲ့ ၀င်လာသူ ဘင်္ဂလီပေါင်း ၂ သန်း + မူလရှိနေတဲ့ ရခိုင်နယ်က သုံးပုံတစ်ပုံသော ရိုဟင်ဂျာ မဟာမေဒင်ရဲ့ လူဦးရေဟာ ရခိုင်နယ် တစ်ခုလုံးကို မြိုပြီး ဖြစ်နေမှာပါ။ အခု လက်ရှိ ရခိုင်နယ်မှာ မွတ်ဆလင် လူဦးရေ ရာနှုန်း ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ပြန်တွက်ပါ၊ အများဆုံး ရခိုင်နယ်ရဲ့ ထက်ဝက် သို့မဟုတ် သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဆို ၀င်လာတယ် ဆိုတဲ့သူ၊ မွေးနှုန်းကောင်းလို့ မောင်းပြန် ဆတိုး ပွားနေတဲ့သူ တွေ ဘယ်ကို ရောက်ကုန်ပြန်သလဲ။- သေချာတဲ့ အဖြေက “မျိုးတုံး သတ်ခံလိုက်ရပြီ”လို့ သာ ဖြစ်နေပါဦးမယ်။
လက်ရှိ အစိုးရ ပြောနေတဲ့ စကားတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ တရားခံ ဖြစ်စေမယ့် စကားများသာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလို ကမောက်ကမ ဖြစ်နေရတာက- ဘယ်အရာကိုမှ မျှမျှတတ မတွေးဘဲ- ထင်ရာလျှောက်ပြောနေတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသာ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့– ငါတို့ဟာ အင်္ဂလိပ်ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကို မယူဘူး၊ ဦးနေ၀င်းခေတ်ကလည်း ကမ္ဘာ့ဆက်ဆံရေး အတွက် မတတ်သာလို့ မပြောင်းခဲ့ရတာ၊ အခု ငါတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားများ ပေးခဲ့တဲ့ အမည်အတိုင်း “မြန်မာ”လို့ ခံယူ လိုက်ပြီ။ ဒီအတွက် ငါတို့မှာ ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်ခံယူခွင့် အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်သလို မျိုး၊- ရိုဟင်ဂျာ များဟာလည်း ဗြိတိသျှ ခေတ်နဲ့ ဦးနေ၀င်းခေတ်က ပေးခဲ့တဲ့ အမည်နာမများကို လက်မခံဘူး- သူတို့လည်း သူတို့ဘိုးဘွားများ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့သလို အမည်နာမကို ခံယူခွင့် ရှိနေတာပဲ – ဆိုတဲ့ မျှမျှတတ တွေး တော စိတ်လေး ထားလိုက်ရင် ပြသနာက တစ်စချင်း ကြီးလာစရာ မရှိပါ။ သူတို့ရဲ့ ဘိုးဘ ပေးခဲ့တဲ့ အမည်နာမ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက- တစ်ဘက်နိုင်ငံက ဘင်္ဂလီတွေ သူတို့နဲ့ မရောသွားနိုင်စေဘို့- သီးခြား ဖြစ်နေ စေတယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင်လောက်ကို ထားမိရင်တောင်- မဆိုးလှသေးပါ။
အဲ့လို မဟုတ်ဘဲ-၊ မျိုးပြုတ်သုတ်သင်မယ်၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရ အပြတ်ရှင်းပစ်မယ်–၊ ဆိုတဲ့ လူမိုက်စိတ်ကို ဆက်ထားနေမယ် ဆိုရင်—–၊ ဘူလုံးတစ်လုံးဟာ လေထိုးထည့်တာကို အတိုင်းအတာ တစ်ရပ်ထိပဲ ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်-၊ ခံနိုင်ရည်ထက် ဆက်ကာဆက်ကာ- လေထိုးထည့်မယ် ဆိုရင်-၊ အဲ့ဒီ ဘူလုံးက ပေါက်ကွဲသွားမှာ သေချာနေပါတယ်။
This entry was posted on February 7, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Slaves of Money, Myanmar Authorities
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများအကြောင်း →